राजकुमारी हया, जसले दिएको पीडामा कविता लेखिरहेका छन् दुबईका शासक | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
राजकुमारी हया, जसले दिएको पीडामा कविता लेखिरहेका छन् दुबईका शासक
असार २०, २०७६ शुक्रबार १०:८:१६ | एजेन्सी
‘अब मेरो साथमा रहन तिमिलाई कुनै अधिकार छैन, मलाई केही फरक पर्दैन तिमी मर या बाँच ।’
‘अब भन्न केही बाँकी रहेन । तिम्रो यो प्राणघातक मौनताले मलाई तनाव दिएको छ । ’
यी पंक्ति कुनै सायर वा कविले लेखेका होइनन् । यस पंक्तिका सिर्जनाकार हुन् दुबईका शासक शेख मोहम्मद अल मकतूम । जसकी श्रीमती राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैन दुबई छोडेर लण्डन गएकी छिन् ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सको शाही परिवारमा यस्तो हुनु आफैँमा अचम्म लाग्दो घटना हो । राजकुमारी अहिले सेन्ट्रल लण्डनको कुनै ठाउँमा बसेको बताइएको छ । राजकुमारी हया घोडसवारीमा भाग लिने गर्थिन् तर यो वर्ष भएको रोयल एस्कटमा उनी उपस्थित भइनन् ।
राजकुमारी हया आफ्नो ज्यानको खतरा महसुस गरिरहेको बीबीसी स्रोतले उल्लेख गरेको छ । यसको कारण उनी आफ्ना श्रीमानविरुद्ध कानुनी लडाईं लड्ने तयारीमा थिइन् ।
कुन देशकी हुन् राजकुमारी हया ?
राजकुमारी हयाको जन्म सन् १९७४ मे महिनामा भएको हो । उनका पिता जोर्डनका राजा हुसैन थिए । उनकी आमाको नाम आलिया अल–हुसैन हो । राजकुमारी हया तीन वर्षको हुँदा नै उनकी आमाको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गयो ।
राजकुमारी हयाले आफ्नो बाल्यकाल ब्रिटेनमा बिताएकी हुन् । उनले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट राजनीति, दर्शन र अर्थशास्त्रको अध्ययन पूरा गरेकी छिन् । उनले पुराना केही अन्तर्वार्तामा आफू बाजलाई पाल्न र ठूला मेशिनको प्रयोगमा रुची राख्ने गरेको बताएकी छिन् । यसबाहेक उनले आफू जोर्डनमा ठूलो ट्रक चलाउने लाइसेन्स पाउने एकमात्र महिला भएको दाबी पनि गरेकी छिन् ।
जब उनी २० वर्षकी भइन् तब उनले घोडसवारीलाई आफ्नो करियरको रुपमा छानेकी थिइन् । घोडसवारीमा राजकुमारी हयाले सन् २००० को ओलम्पिक खेलमा जोर्डनको प्रतिनिधित्व पनि गरेकी थिइन् । उनी उक्त ओलम्पिक खेलमा आफ्नो देशको ध्वाजावाहक पनि थिइन् ।
सन् २००४ को अप्रिल १० मा राजकुमारी हयाले दुबईका शासक र संयुक्त अबर इमिरेट्सका उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मदसँग विवाह गरिन् । त्यतिबेला राजकुमारी ३० वर्षकी थिइन् । शेख मोहम्मद ५३ वर्षका थिए । राजकुमारी हया शेख मोहम्मदकी छैटौँ श्रीमती थिइन् । उनको विभिन्न श्रीमतीबाट २३ जना सन्तान भएको बताइने गरिएको छ ।
राजकुमारी जस्तै शेख मोहम्मद पनि घोडाको पारखी थिए । उनी गो–डोल्फिन नामको घोडाको तबेलाका मालिक पनि थिए । यी दुईको विवाह अम्मानमा भएको थियो ।
विवाहपछि राजकुमारी हयाले थुप्रै पटक शेख मोहम्मदसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे जानकारी दिँदै आफू अत्यधिक खुशी भएको बताएकी थिइन् । इमिरेट्स वुमेन म्यागजिनको २०१६ को अंकमा राजकुमारी हयाले शेख मोहम्मदबारे भनेकी थिइन्, ‘उनले जे गर्छन् त्यो अद्भूत हुन्छ । म हरेक दिन भगवानलाई धन्यवाद अर्पण गर्छु म उनको यति नजिक छु ।’
किन आयो सम्बन्धमा खटपट ?
गएको वर्ष शेख मोहम्मदकी जेठी छोरी शेखा लतिफा देशबाट भाग्ने कोसिस गरिन् । यहीँबाट राजकुमारी हया र शेख मोहम्मदबीचको सम्बन्धमा पनि खटपट सुरु हुन थाल्यो । एउटा भिडियोमा ३३ वर्षकी राजकुमारी शेखा लतिफाले उनको परिवारमा कसैलाई पनि स्वतन्त्रता नभएको र आफूलाई मनपर्ने कुरा गर्ने अधिकार नभएको बताइकी थिइन् । जुन भिडियो संसारभर फैलिएको थियो ।
त्यतिबेला शेखा लतिफा समुद्रको बाटो हुँदै संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट भाग्न सफल भएको मिडिया रिपोर्टमा प्रकाशित भए । भाग्नमा उनलाई फ्रान्सेली एक नागरिकले सहयोग गरेको बताइएको थियो । भारतको समुद्री सीमा नजिकैको सेनाले उनलाई रोकेर पुनः दुबई पठाएका थिए ।
डिसेम्बरमा उनको आयरल्याण्डका पूर्व राष्ट्रपति मेरी रोबिनसनसँग बसिरहेको तस्बिर सार्वजनिक भयो । दुबईको प्रशासनले घर छोडेर भागेकी शेखा लतिफा अन्य देशमा उत्पीडनको शिकार हुने भन्दै दुबईमा नै सुरक्षित राखिएको बताएको थियो ।
यही घटनापछि र उनका श्रीमान र परिवारका सदस्यले उनीमाथि दवाब बढाउन थाले । अवस्था कस्तोसम्म भयो भने उनी आफूलाई दुबईमा असुरक्षित महशुस गर्न थालिन् ।
शेख मोहम्मदले अहिलेसम्म राजकुमारी हयाले दुबई छोडेको कुनै आधिकारिक बयान दिएका छैनन् । उनले १० जूनमा इन्स्टाग्राममा एउटा धोकासम्बन्धी कविता लेखेका थिए ।
यतिमात्रे होइन शेख मोहम्मदको आफ्नो नामको एउटा वेब साइट छ जसमा उनी धेरैजसो कविता लेखिरहन्छन् ।
टाइम्स अफ लण्डनको एक रिपोर्ट अनुसार राजकुमारी हयासँग उनका ११ र सात वर्षका दुई सन्तान पनि भागेका छन् । यी बच्चाहरुको नाम शेख जायद र शेखा अल जलिला बताइएको छ ।
शाही परिवारको एक नजिकको स्रोतले बीबीसीलाई दिएको जानकारी अनुसार राजकुमारी हया ब्रिटेनमा राजनीतिक शरण लिने कोसिस गरिरहेकी छिन् । साथै उनी शेख मोहम्मदसँग सम्बन्धविच्छेद लिने तयारीमा पनि छिन् ।
अहिले शेख मोहम्मद लगातार कविता लेखिरहेका छन् । उनले केही समय अघिमात्रै लेखेका छन् :
‘मलाई एउटा पीडा भएको छ जुन कुनै औषधिले निको हुँदैन,
कसैबाट पनि यसको उपचार छैन ।’
– बीबीसी हिन्दीबाट
अन्तिम अपडेट: असोज २१, २०७६
रेल, सडक र जल यातायातलाई १ खर्ब ९ अर्ब बजेट : काठमाडौंमा केबलकार र मेट्रो
राजस्थानले दियो बेंग्लोरलाई १६५ रनको लक्ष्य
छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाउने तयारी
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा सेवा प्रदायकहरुकाे योगदान घट्यो
काठमाण्डाैकाे धर्मस्थलीमा विद्यालयकाे बार्दली भत्किँदा ४२ विद्या...
मुल्यवृद्धि उकालो लाग्यो, रेमिट्यान्स घट्याे, विदेश जाने बढे
यूएईमा दूतावासको प्रतिनिधि भन्दै ठगी गर्ने बिचौलिया सक्रिय, स...
राष्ट्रिय गौरवका योजना तोकिएको समयअघि नै सम्पन्न गर्न एक्सन रुम...
बैतडी डोजर प्रकरणः ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन
काठमाण्डौमा ऊर्जा सम्मेलन : २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन र ...
अप्रेशन थिएटरको पीडा, जनरल वार्डको मलम
प्रहरी देखेपछि माेटरसाइकल छाेडेर तस्कर भागे, १० किलाे चाँदी...
पलाँतामा बन्ने भयाे रंगशाला, मिरा स्मृति कप यसमै सञ्चालन हुने
पशुपति घाट सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा थपियो
जनकपुर गोलीकाण्ड : पैसा लिन घरमै बोलाएर गोली हानी हत्या
भत्काउँदै गरेकाे पुरानाे घरले थिचेर चावहिलमा दुई जना घाइते
कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा रजनी केसी साझा पार्टीको उम्मेदवार
सांसद क‌ँडेलसहित परिवारका ४ जना सदस्य पनि भारतीय नागरिक !
महिलालाई हुत्याउने डोजर चालक पक्राउ
‘विप्लव’ समूह सरकारसँग वार्तामा बस्न पहिलो पटक सकारात्मक, अघि सार्‍याे २ शर्त
युट्युबबाट गीत हटाएसँगै रिहा भए दुर्गेश
'बाध्यताले विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न रोजगारीको नयाँ एजेण्...